भक्तपुरबाट एक महिनाअघि हराएकी १० वर्षे बालिका मृत भेटिइन् तर खुलेन रहस्य - समाज - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
दीपक खरेल काठमाडौं माघ २७
उनको खोजीका लागि महानगरीय प्रहरी अन्र्तगतका तीनै जिल्लाका प्रहरी खटिए।
भक्तपुर प्रहरीले दुई पटकसम्म प्रहरीका तालिम प्राप्त कुकुरको प्रयोग गर्‍यो। खोजी र घटनाको अनुसन्धानका लागि महानगरीय अपराध महाशाखा समेत परिचालन भयो। तर २७ पुसमा भक्तपुर दरबार क्षेत्रबाट बेपत्ता भएकी काभ्रेकी १० वर्षीया सुनमाया तामाङको कुनै पत्तो लागेन।
उनी हराएको ठिक एक महिनापछि २६ माघ २०७५ मा सुनमायाको शव भक्तपुर, राधेराधेस्थित हनुमन्ते खोलामा भेटिएको छ। पानीमा सुन्निएको अवस्थामा रहेको शव सड्ने क्रममा थियो। शव हेरेर अनुहार पहिचान गर्न कठिन रहेको प्रहरीको भनाइ छ।
काभ्रेको मण्डन देउपुरस्थित उमाशह उच्च मावि, कक्षा ५ मा अध्ययनरत उनी शैक्षिक भ्रमणका लागि भक्तपुर आएकी थिइन्।
कसरी हराइन् सानुमाया?
सुनमाया विद्यालयका ५ शिक्षकसहित ६० जनाको समूहमा काठमाडौं उपत्यकाको शैक्षिक भ्रमणमा आएकी थिइन्। यो भ्रमण टोलीमा सवारीचालक सदस्यसहित ६७ जना थिए। भ्रमण टोलीमा सुनमायाकी दिदी उर्मिला पनि सँगै थिइन्।
२७ पुस २०७५, अपरान्ह ३ बजे भ्रमण टोली भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा प्रवेश गरेकोे क्लोज सर्किट क्यामरा (सिसिटिभी) को भिडियो फुटेजमा देखिन्छ। विद्यार्थी टोली ३ बजेर ५६ मिनेटसम्म दरबार क्षेत्रमै यताउता घुमेको थियो। त्यसपछि १२ मिनेट कहीँ कतै कुनै दृश्य देखिँदैन।
महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरकाअनुसार सुनमाया पहिलो पटक भक्तपुर आएकी थिइन्। सो क्षेत्रमा उनी चिनजानका कसैको पनि बसोबास छैन।
दिदी उर्मिलाकाअनुसार भक्तपुर दरबार क्षेत्रको भ्रमणपछि टोली गाडीमा चढ्न बसपार्क तर्फ आयो। सबैजना गाडी चढे। सानुमाया छुटेको त्यहीँनेर थाहा भयो। केही किन्न पसल गएकी हुनसक्ने कसै कसैले बताए। स्पष्ट कसैले भन्न सकेनँ। तर उनी बसमा फर्किइनन्।
‘भ्रमण टोलीको नेतृत्व गर्नुभएका शिक्षकहरुले बसमा रहेका बालबालिका गन्ती गर्दा सुनमाया त्यहाँ नभएको पत्ता लाग्यो,’ उमाशह माबिका प्रधानध्यापक शालिग्राम श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने ‘सुरुमा आसपासमा खोज्यौं। नभेटिएपछि प्रहरीमा खबरगरी राती १२ बजेसम्म हामी भक्तपुरमै रह्यौं।’
भक्तपुर प्रहरी प्रमुख एसपी हिमालय श्रेष्ठका अनुसार उनको खोजीमा प्रहरीले अनुसन्धानमा कुनै कसर बाँकी राखेन। एउटापछि अर्को अनुसन्धान विधि अपनाएर पनि खोजी गर्‍यो। तर पत्ता लगाउन सकेन।
शनिबार उनको शव भेटिएसँगै केही गम्भीर सवाल उत्पन्न भएका छन्। बालिका हराएको दिनदेखि शनिबारसम्म कहाँ, कुन अवस्थामा थिइन्? उनीसँग के भयो र के गरियो? उनी कसरी मृत्युको अवस्थामा पुगिन्? प्रहरीले अब यी विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित गरेको एसपी श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘एक महिनादेखि हामी बालिकाको खोजीमा थियाैं। उपत्यकाका गुम्बा, शंकास्पद घर र स्थान केही बाँकी नराखी खोज्यौंं,’ सानुमायाको शव भेटिएपछि एसपी श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने ‘दुई पटकसम्म त हामीले प्रहरी कुकुरको प्रयोग गर्‍यौं।’ प्रहरीले गम्भीर प्रकृतिका अपराध एवं सर्च एन्ड रेस्क्युका लागि तालिम प्राप्त प्रहरी कुकुर परिचालन गर्छ।
प्रहरीले सुनमायालाई गुम्बा र अनाथ बालबालिका राख्ने संस्थाहरुमा लगिएको हुनसक्ने शंकामा खोजी गरेको थियो। यसबाहेक भक्तपुरका घरघरमा पुगेर सोधपुछ गरेको एसपी श्रेष्ठको भनाइ छ। तर उनीबारे कुनै सुराक नपाएको प्रहरीले एक्कासि शव बरामद गरेको हो।
प्रहरीले शनिबार बिहान भक्तपुरको सूर्यबिनायक नगरपालिका–५ राधे राधेस्थित हनुमन्ते खोला किनारामा सुनमायाको शव फेला पारेको थियो। स्थानीयले शव देखेपछि प्रहरीलाइ खबर गरेका थिए।
परिवार सदस्य र विद्यालय शिक्षकले उनको लुगा र हुलियाका आधारमा शवको पहिचान गरेका थिए। सुनमायाको पोस्टमार्टम शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भएको छ। त्यसको रिपोर्ट आउन केही दिन लाग्नेछ। ‘पोष्टमार्टम रिपोर्टपछि उनको मृत्यु, मृत्युको कारणबारे केही खुल्न सक्छ’, एसपी श्रेष्ठ भन्छन्।
प्रकाशित २७ माघ २०७५, आइतबार | 2019-02-10 19:40:47